Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo soo bandhigay qalab casri ah oo loogu tala galay in garsoorayaasha ay ku xiriiraan + SAWIRRO – Gool FM
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo soo bandhigay qalab casri ah oo loogu tala galay in garsoorayaasha ay ku xiriiraan + SAWIRRO
jilacow November 17, 2016
(Muqdisho) 17 Nof 2016.Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa simaar hal maalin ah u qabtay garsoorayaal isugu jiro heer qaran, heerka koowaad iyo labaad .
Ujeedka aqoon kororsiga ayaa ahaa mid loogu tala galay in sare loogu qaado tayada garsooyaasha waxaana ka qeyb qaatay 25 garsoore.
Siminaarkaan ayaa waxaa bixinayay Madaxa waxbarashada Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ahne Macallinka garsoorayaasha xiriirka CAF Mudane Cali Saciid.
Goobta siminaarka uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan Xiriirka SFF uu ugu horeeyo guddoomiye ku xigeenka koowaad Xiriirkaas Mudane Cali Shiine iyo guddoomiyaha waaxda garsoorka Cismaan Jaamac Diraac.
Sidoo kale intii uu socday siminaarka ayaa waxaa lagu soo bandhigay qalab casri ah oo loogu tala galay garsoorayaasha kuwaas oo ku dhex dhexaadin doonaan kullamada horyaalka.
Qalabkaan ayaa ah mid loogu tala galay in ay ku xiriiraan garsoorayaasha waxaana xiriirka SFF ugu deeqay CAF.
Sida qorshaha uu yahay tijaabada qalabkaan cusub ayaa la sameyn doono maalinta bari ah, gaar ahaan kullanka furitaanka ee horyaalka.
Guddoomiyaha waaxda garsoorka Cismaan Jaamac Diraac oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waaxda garsoorka uu isaga hoggaanka u yahay in ay yihiin kuwo u bisil shaqadooda isla markaana ka rajeeyay in si wanaagsan ay kusoo gaba gabeeyaan horyaalka bari billaaban doono.
Cali Shiine oo ah guddoomiye ku xigeenka koowaad Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo ka hadlay goobta ayaa ku dhiiro galiyay garsoorayaasha in ay noqdaan kuwo kasoo baxa shaqadii loo idmaday , isagoo sidoo kale u mahad celiyay xiriirka CAF oo qalab casri ah Soomaaliya ugu deeqay.
Sikastaba siminaarka loo qabtay garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaya xilli bari uu furmi doono horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya 2016-2017.
Sawir Qaade C/Fitaax Nani
Xiddig Amaah ugu maqan kooxda Heegan oo geeriyooday
Barcelona oo laba laacib ka doonaysa Bayern Munich